tolis.co Ukuvumisa ngeenkwenkwezi Uqikelelo May 2022 Kuba Zonke Iimpawu zeZodiac
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi May 2022
Live Support Uncedo Nxibelelana
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi Isazi ngeenkwenkwezi Uhlalutyo @ Ukuvumisa Amanqaku
Usuku lweendibano ezimnandi kunye notyelelo! Ubudlelwane boluntu kunye nemisebenzi yolonwabo iyathandwa.
Uthando: Lusuku oluhle ukubonisa uthando lwakho kumntu omthandayo. Ungayenza ngokulula. Ukuba ukuza kuthi ga ngoku ubukhe wangaboni ngasonye, ​​lithuba lokuba uzisombulule ngengxoxo ethembekileyo.
Umsebenzi wobungcali: Lusuku oluhle lokuxoxa, ngakumbi ukuba ziqulathe ukonwaba okanye zinxulumene neemveliso ezisetyenziswa ngabafazi. ... Kaninzi
Utyekelo lokubaxa nokuchitha. Umsindo wokuthenga abathengi ukhokelela ekubeni uchithe imali kwaye emva koko uzisole, ngelixa isidingo sakho sokufumana isiqabu singakhokelela kukugqithisa.
Uthando: Kuya kufuneka ulumke, kuba ngelixa unethuba lokwenza ubudlelwane obutsha, uya kubambelela kwiimpawu zangaphandle, ezingazukuhlangana nawe ngelo xesha. ... Kaninzi
Ungabonisa ububele bakho kwabanye namhlanje kwaye ngakumbi kumalungu osapho lwakho. Namhlanje ikunika intlalontle kwaye ivuse inkanuko yakho. Uya kuba yinkcitho kwaye utye kakhulu.
Uthando: Uya kuba nemvakalelo yokulala inkanuko namhlanje. Uya kuhlala kakuhle naye wonke umntu kodwa ngakumbi neqabane lakho. Ibhondi yakho iya kunceda kakhulu. Olu suku lunokuphawula ukuqala kobudlelwane obutsha, ukuba awukabikho. ... Kaninzi
Umvuzo ovela kubaphathi emsebenzini kunye noncedo lwabantu abasemandleni okanye abantu abadala, kuzisa olu suku. Unendlela yokugcina ibhalansi yakho. Udumo lwentlalo kunye nokuqaqamba. Usuku olungileyo lokusebenzisana, njengoko lusekwe kuzinzo nakwimo yokuvumelana.
Uthando: Usuku olulungileyo lokuxoxa kunye nokuqinisekisa kwakhona iimvakalelo kunye neminqweno kubudlelwane.
Umsebenzi Wobungcali: Uya kuziva uluncedo kakhulu namhlanje kwaye uza kukwazi ukusingatha imiba emininzi yobungcali, oya kuthi kamva uyiqonde indlela ekuncede ngayo. Imicimbi yobungcali enxulumene nobuhle iyathandwa ngokukodwa. ... Kaninzi
Ngelixa uziva ufuna ukuqonda, uthando kunye nokuthantamisa, ukufumanisa kunzima ukuzonwabela kuba izinto zangaphandle ziyakutyhala. Ukujamelana nako unokuchacha kwaye uphumle kamnandi.
Kunzima ukuzilawula namhlanje, kodwa kuthintele ukudideka. Kulula ukufumana ubunzima okanye ukungcola.
Uthando: Intlalontle yakho yomelele kakhulu namhlanje kwaye uya kuhlalisana kakuhle nabahlobo bakho, njengoko kunjalo nabathandi bakho okanye iimpazamo zakho. Uqhele ukubaxwa kancinci kwindlela oveza ngayo iimvakalelo zakho kunye nendlela okonwaba ngayo.
Umsebenzi Wobungcali: Usuku lokuphumla nokuzola. Nangona kunjalo, ukuba kuyafuneka ukuba usebenze, awuyi kujongana neengxaki kubudlelwane bakho nabanye, kodwa kungcono ukuhlehlisa uthethathethwano okanye izivumelwano ezibalulekileyo, kuba uya kwenza lula ukuyekelela ukuze uphephe ukungavisisani kunye neengxabano. ... Kaninzi
Uxolo lwangaphakathi oluqaqanjisiweyo namhlanje, ngamandla abenza bambi abanye kwaye abaqinisekise ukuba banike uthando nothando.
Uthando: Iimvakalelo zothando zinamandla ngakumbi ngeli xesha leplanethi. Uziva ukhuselekile ngokwasemphefumlweni, imood yakho ilungile kwaye ulungelelwaniso lwakho lwengqondo luyakhazimla kwaye lukwenza ube nomtsalane kakhulu. Ishishini
Usuku oluhle lokunxibelelana namaqela. ... Kaninzi
Inkanuko yakho kunye nomtsalane kuphakanyisiwe namhlanje. Ungonelisa kwaye wonwabise iminqweno yakho kumntu onomdla kuye.
Uthando: Isenzo sokwabelana ngesondo sinamandla kakhulu kwaye ukuba awubandakanyekanga kubudlelwane bezesondo uyakufuna Unethuba lokufuna uthando ngempumelelo enkulu. ... Kaninzi
Imvisiswano idibana nemvisiswano! Uthando luhlangabezana nothando! Ukuthantamisa kudibana nokuthantamisa! Ukuqonda kudibana nokuqonda! Usuku oluhle kakhulu olunika ukhuseleko lweemvakalelo kunye namandla okwenza umazibuthe kubo bonke!
Uthando: Thatha inyathelo lokuqala kubudlelwane bakho namhlanje kwaye uyakumangaliswa ziziphumo. Sukugcina mntu ebumnyameni ngeemvakalelo zakho kwaye ubonise indlela oziva ngayo. Kulabo bangekho kubudlelwane, baya kuba nethuba elihle lokuqala elinye.
Umsebenzi Wobungcali: Ukuba ucinga ukuba intsebenziswano yabanye iyafuneka, lusuku lokuyifuna. ... Kaninzi
Umsebenzi Wobungcali: Usuku oluhle lokusingatha imicimbi enzulu yeshishini, njengoko unenjongo, ugcina kwaye ungenzeleli. Namhlanje awulawulwa ziimvakalelo zakho kodwa ngengqondo yakho. ... Kaninzi
Ubomi bentlalo obonwabisayo kunye nolwazi oluqhelekileyo. Namhlanje kuzisa iziqinisekiso kwaye kudala imincili yengqondo. Kukho amathuba namhlanje ukuba umdla okhethekileyo oza kukubonisa wona umntu wesini esahlukileyo.
Uthando: Ukuzonwabisa! Uya kuziva uthandwa ngokukhethekileyo namhlanje. Uyakuva ukuba ubomi bakho liqela elingenasiphelo kunye nepati yababini. Umoya wakho owonwabileyo kunye nomtsalane ongapheliyo oya kuwukhupha uya kukwenza ungathinteleki.
Umsebenzi Wobungcali: Uya kukonwabela ukusebenza njengeqela kunangaphambili. Ukuba ufuna ukwenza umbono olungileyo emntwini, olu lusuku oluhle lokudibana nabo. ... Kaninzi
Ukusilela kokuqonda kunye nokudideka ngokweemvakalelo zezona zinto ziphambili ezikhokelela kwizenzo ezigwenxa kwimicimbi yezentlalo, kodwa nakwindlela yokuphathwa gwenxa kweengxaki zosapho. Usuku lunotyekelo lwenkunkuma engathintelwanga kunye ne-mania yokuthenga.
Usuku lubeka iingxaki ezingephi, nangona oko kusenokukukhathaza konakalise usuku lwakho.
Uthando: Uya kuba nenkanuko namhlanje. Kodwa khumbula ukunika iqabane lakho indlela encinci ukuze lingene kwimeko efanayo. Sukuyicinezela. Sebenzisa umtsalane wakho ukumrhwebesha ukuba onwabe nawe. ... Kaninzi
Uqikelelo lwemihla ngemihla -Uhambo, Imephu, Ubuso, Iiplanethi, Izindlu, Iimpawu zeZodiac kwaye Kaninzi
Horoscope yokuzalwa Simahla
Imephu, Ubuso, Iiplanethi, Izindlu, Iimpawu zeZodiac kwaye Kaninzi
IsiXeko okanye iLali
Bhala isixeko okanye ilali (kunye nethoni ukuba ubhala isiGrike nokuba sincinci okanye oonobumba abakhulu) kwaye ulinde ukuba ivele imizuzwana embalwa kamva ebhokisini eya kuvula xa uyeka ukuthayipha. Ukuba akukho sixeko okanye lali ivelayo, chwetheza abalinganiswa besiNgesi, kunye / okanye ukhethe ilizwe kwibhokisi edlulileyo. Unokubhala kuphela oonobumba bokuqala besixeko kwaye ulinde iziphumo ukuba zivele ukuba zikhethe.
Ukuba awukhethanga iLizwe kwaye usebenzisa iLizwe liphela ungachwetheza nelizwe ukunciphisa iziphumo. E-United States chwetheza i-US kuphela hayi i-United States. Umzekelo ukuba isixeko sakho siSan Francisco, chwetheza elangeni francisco us
Ukuba isixeko saseWashington kuba zininzi kakhulu iWashington ungachwetheza nomzekelo wombuso: I-Washington us
Kodwa ukuba ukhethe iLizwe ngaphambili kwaye usebenzisa iUnited States umzekelo chwetheza kuphela isixeko / idolophu / ilali hayi ilizwe.
Ukuba uzama ukufumana isixeko sakho kwaye iskripthi sibonakala ngathi asisebenzi, umzekelo awunakubona ivili elincinci lokuqengqeleka ngasekunene kwebar apho uchwetheza khona, thayipha nje isixeko okanye indawo yangasemva Ileta yokugqibela kwaye uyibhale kwakhona.
umthetho wabucala Isivumelwano selayisensi Uncedo Malunga